Orlistat （96829-58-2 factory Warshadaha soo-saaraha soosaaraha
CMOAPI waxay leedahay noocyo kala duwan oo ceyriin ah oo ka kooban Orlistat （96829-58-2）, waxayna leedahay wadarta nidaam maarayn tayo leh Sidoo kale waxay gudbisay shahaadada GMP iyo DMF.
Category: Miisaanka ayaa luma
Macluumaadka Saldhigga budada ee Orlistat
magaca Dufanka Orlistat
Muuqaal budada crystalline White
Miisaanka kelli 495.7 g / mol
Formula kelli C9H7ClN2O5
saxid kaydinta Qaboojiyaha 2-8 ° C
Waa maxay liiska?
Orlistat waa dawo dhakhtar qoro oo loogu talagalay daaweynta buurnaanta oo ay weheliso kalooriyeynta la ilaaliyo iyo cuntada dufanka yar. Waxaa loo iibiyaa dawo ahaan rijeetada oo hoos timaada magaca xayeysiiska ee 'Xenical' iyo sidoo kale daawada buurnida ee ka hortagga buurnida ee hoos timaad magaca ganacsiga Alli.
Orlistat waa xannibaad muddo dheer socotaa oo afka caloosha ka joojiya kaas oo ugu horreyn ka shaqeeya ka hortagga nuugista dufanka. Orlistat waa qaabka saturate ee lipstatin, taas oo ah wax-ku-ool waxtar u leh dabiiciga dabiiciga ah. Orlistat waa mid fudud oo xasilloon oo markaa laga doorto foomka waalidkiis lipstatin.
Orlistat waxay u shaqeysaa inay bixiso miisaan lumis waqti yar ah sidoo kale waxay yareysaa dufanka muuqda. Si kastaba ha noqotee waxaa loo isticmaalaa farsamooyinka kale ee miisaanka luminta sida cuntada dufanka yar iyo jimicsiga. Faa'iidooyinkiisa sida qorshe kasta oo miisaan lumis ah ma aha deg deg laakiin waa qorshe muddo dheer soconaya, kaas oo ay kugula talinayaan dhakhaatiirta caafimaadka.
Maaddaama ay u shaqeyneyso iyada oo la xakameynayo nuugista dufanka cuntada ee ka dhigaya in laga saaro wasakhda isbeddelka saxarada aadanaha, waxaa jira dhacdooyin badan oo ah dhacdooyinka caloosha ee ku dhaca isticmaalkiisa. Dhibaatooyinkan soo noqnoqda waxay isu rogi karaan waxyeelo daran iyo mid xun intaba iyadoo la kordhinayo qiyaasta. Si looga adkaado ama loo yareeyo dhibaatooyinka soo raaca orlistat waa in lala qaato cunno dufanku ku yar yahay iyo sidoo kale kaabis badan oo fiitamiin ah.
Sidee Orlistat u shaqeeyaa & Muxuu Dhab ahaan Sameeyaa?
Orlistat waxaa loo yaqaan 'pancreatic inhibitor' iyo 'lipase gastric'. Enzymes-kan (gastric iyo pancreatic lipases) ayaa mas'uul ka ah burburka triglycerides (dufan / lipid jirka ku jirta) oo ku jira mindhicirada.
Orlistat badanaa waxay ku soo bandhigtaa saameynteeda lumen ee caloosha iyo sidoo kale xiidmaha yar. Orlistat waxaa loo yaqaanaa inuu ku xirnaado goobta haraaga firfircoon ee hargabka caloosha iyo xammeetida si loo sameeyo dammaanad wada jir ah. Enzymes-kan ayaa sidaas darteed la furey oo aan la heli karin si loo nadiifiyo dufanka cuntada ee qaabka triglycerides ee astaamaha dufanka leh iyo monogylcerides oo si fudud jidhku u nuugo.
Marka dhaqdhaqaaqooda la joojiyo, triglycerides laga helo cuntada aadanaha looma beddelo asiidh dufan leh oo jidhku nuugo. Sidaa darteed, triglycerides-ka ayaa laga soo saaraa saxarada aadanaha. Maaddaama triglycerides aan isbeddel lahayn aan lagu nuugin jirka, tani waxay keenaysaa hoos u dhac ku yimaada kaloriinta oo door ka ciyaareysa xakameynta miisaanka.
Dhawaan, liiska ayaa sidoo kale lagu ogaadey inuu yahay mid xakameynaya domainka thioesterase ee synthase fatty acid (FAS). Enzyme, thioesterase, wuxuu kuxiranyahay badashada unugyada kansarka laakiin kuma xirna koritaanka unugyada caadiga ah.
Liistada miyuu shaqeeyaa haddii aadan cunin dufanka?
Hagaag, liiska shaqadu wuxuu u shaqeeyaa si loo yareeyo qadarka dufanka ee nuugaya nidaamka jirka. Sidaa darteed looma baahna in la qaato liis garayn marka aad qaadanayso cunto aan dufan lahayn. Haddii ay dhacdo inaad ku jirto liiska daawooyinka isla markaana aad cuntid cunto aan dufan lahayn, waxaa lagugula talinayaa inaad ka boodo qaddar si looga fogaado dhibaatooyinka soo raaca.
Si kastaba ha noqotee, haddii aad cuntid cunto dufan aad u badan leh, waad la kulmi kartaa qor liiska waxyeelooyinka sida saxarada dufanka badan, gaaska xiidmaha iyo dhibco dufan leh.
Orlistat ayaa la caddeeyey si loo yareeyo baruurta uur-ku-jirta ah?
Haa, runtii liiska ayaa si caafimaad ahaan loo xaqiijiyay si loo yareeyo dufanka muuqda. Alli (orlistat 60 mg) waxaa ansixiyay Maamulka Cuntada iyo Maandooriyaha (FDA) oo ah daroogo miiska laga iibsado si loo daaweeyo buurnaanta.
Daraasado caafimaad ayaa caddeeyay taas ama liiska ma aha oo kaliya inay gacan ka geysato dhimista miisaanka laakiin sidoo kale waxay si weyn u yareyneysaa dufanka xubnaha jirka. Waxaa la ogaaday inay yareyneyso wareegga dhexda.
Baruurta visceral sidoo kale loo yaqaan dufanka firfircoon waa nooc khatar ah oo dufan ah oo ku keydsan gudaha daloolka caloosha sidaa awgeed wuxuu ku wareegsan yahay xubnaha ugu muhiimsan ee gudaha sida beerka, xiidmaha iyo xammeetida. Xaddiga badan ee dufanka xubinta taranka ayaa lala xiriiriyaa dhibaatooyin caafimaad oo fara badan sida nooca sonkorowga 2, xanuunnada wadnaha, kansarrada qaarkood, dhiig karka, iyo cudurka Alzheimers.
Inta lagu jiro miisaanka oo yaraada, dufanka dareeraha ah ayaa ka mid ah dufanka ugu horreeya ee luma. Tani waxay si weyn u wanaajineysaa caafimaadkaaga iyadoo la yareynayo halista dhibaatooyinka caafimaad ee ugu badan sida sonkorowga, dhiig-karka, iyo xanuunnada wadnaha.
Daraasad ku lug leh kaqeybgalayaasha 26, orlistat 60 mg (Alli) ayaa la maamulay seddex jeer maalintii iyadoo lagu darayo kalooriga oo yaraaday, cuntada dufanka yar ee 3 bilood. Natiijooyinka waxay muujiyeen in, ama liiska ay awood u yeesheen inay si weyn u yareeyaan wareegga dhexda oo ah cabbirka dufanka jirka. Waxay soo sheegeen 5.6% hoos u dhaca miisaanka jirka iyo 10.6% hoos u dhaca dufanka visceral.
Daraasad kale, 123 qof oo buurnida leh ayaa la siiyay ama liis garayn saddex jeer maalin kasta 24 usbuuc. Waxaa sidoo kale lagula taliyay inay ilaaliyaan cunada dufanka yar. Ka dib bishii lixaad, kaqeybgalayaashu waxay soo sheegeen celcelis dhimista miisaanka jirka ee 5.96% iyo celceliska dhimista dufanka visceral ee 15.66%.
Liistada miyuu keenaa dhaawaca beerka?
Orlistat looma aqoonsan inay tahay sababta tooska ah ee dhaawaca beerka ee daran ee tijaabooyinka daaweynta iyo daaweynta labadaba. Si kastaba ha noqotee, kiisaska dhifka ah ee daran ee dhaawaca beerka liistada waxaa soo sheegay dadka isticmaalay liiska.
Orlistat waxay xaddidi kartaa shaqada enzyme muhiim ah oo loo yaqaan carboxylesterase-2. Enzyme, carboxyleserase-2 ayaa door muhiim ah ka ciyaara sunta sunta ee beerka, kelyaha iyo marinka caloosha oo dhan. Marka enzyme-kan la joojiyo waxay sababi kartaa suntan daran ee xubnaha muhiimka ah.
Maamulka Cuntada iyo Maandooriyaha ayaa sidaas darteed ku calaamadeeyay dhaawaca beerka ee daran inuu yahay mid ka welwelsan nabadgelyada marka loo eego liiska. Tani waxay ku saleysan tahay qiyaastii 13 xaaladood oo dhaawac beer ah ka dib suuqa ka dib ama isticmaalka liistada kadib.
Daraasadaha la sameeyay, liistada lama helin inay tahay sababta tooska ah ee dhaawaca beerka daran. Si kastaba ha noqotee, halista suurtagalka ah ee liiska dhaawaca beerka ee la xidhiidha waa inaan la iska indhatirin. Way fiicantahay inaad had iyo jeer la tashato dhaqtarkaaga talooyinka ugu fiican kahor intaadan qaadan liiska ama daroogo kale.
Faa'iidada ugu weyn ee liiska waa miisaan lumis. Xaqiiqdii, liiska miisaanka oo yaraada ayaa ah aasaasiga iyo faa iidada la og yahay ee la soo saaray loona suuq geeyo. Waxaa loo isticmaalaa in lagu daaweeyo cayilka iyo ka caawinta dhimista miisaanka.
Faa'iidooyinka liiska ayaa ah:
Cayilnaanta iyo cayilku waxay loola jeedaa dufan aan caadi ahayn ama xad-dhaaf ah oo ku ururaya jirka. Isku soo wada duuboo xad dhaafkan ayaa leh khatar caafimaad oo weyn. Qiyaasta buurnaanta ayaa ah tusmada cufnaanta jirka ee badanaa loo xisaabiyo miisaankaaga kiilogaraam oo loo qaybiyay laba jibbaaran dhererkaaga oo mitir ah.
Cayilku wuxuu la xiriiraa dhibaatooyin caafimaad sida wadno xanuun, kaadi macaan, kansarrada qaarkood iyo dhiig karka. Nasiib wanaag, xitaa miisaanka oo yaraada ayaa yareyn kara arrimaha caafimaadka ee la xiriira buurnida.
Caadi ahaan, dad aad u cayilan iyo cayilan ayaa lumiya miisaankooda iyagoo hubinaya cuntada, qaab nololeedka oo ay weheliso jimicsi. Daawooyinka ama daawooyinka miisaanka lumiya ayaa loo qoraa si ay ula socdaan nolol caafimaad leh oo ah ikhtiyaar dheeraad ah.
Si kastaba ha noqotee, miisaanka oo yaraada, laguma gaari karo habeen laakiin sida caadiga ah qorshe muddo dheer ah. Qorshaha miisaanka oo yaraada wuxuu badanaa ka koobnaan doonaa cunno habboon, jimicsi, iyo meesha daawada lagama maarmaanka ah. Qorshaha miisaanka oo yaraada waxaa badanaa loo arkaa mid guuleysta markaad lumiso 5 boqolkiiba ama in ka badan miisaankaaga daaweynta kahor hal sano gudahood. Taas macnaheedu waa inaad u baahan tahay inaad lumiso qiyaastii nus kiilo garaam usbuuca ugu horreeya ee daaweynta. Miisaankan miisaanka yar wuxuu hubiyaa inaad miisaanka ilaaliso ama xitaa aad lumiso culeys dheeraad ah adiga oo sii wataya qorshaha miisaanka luminta.
Orlistat oo loo isticmaalo kaloriin yar iyo cunto dufan yar iyo sidoo kale jimicsi ayaa bixiya qorshe miisaan lumis xoog leh. Orlistat, ka hortagga dufanka caloosha, wuxuu hoos u dhigi karaa xaddiga dufanka nafaqada ee aad nuugto 25%. Orlistat wuxuu u shaqeeyaa adoo xakameynaya lipases-ka caloosha iyo qanjidhada. Kuwani waa enzymes oo u kala jajabiya dufanka cuntada (triglycerides) qaabka loo nuugi karo, acids dufanka leh ama monocerides.
Marka waxqabadka enzymes-kan la joojiyo, jidhku ma awoodo inuu nuugo kalooriyada laakiin dufanku waa la soo saaraa iyada oo aan saxaradu ku dhicin. Tani waa arrin muhiim u ah xakameynta miisaanka.
Dhowr daraasado caafimaad ayaa la sameeyay oo caddeeyay in liiska faa'iidooyinka miisaanka lumay ay runtii yihiin kuwo awood leh.
Daraasad ku lug leh 3,305 kaqeybgalayaal miisaankoodu sarreeyay, orlistat waxaa lagu qaatay 120 mg saddex jeer maalintii 4 sano. Kaqeybgalayaasha waxaa sidoo kale lagula taliyay inay ku ekaadaan cunno yar oo kalooriye ah oo aan ka badneyn 30% kalooriyada. Waxaa lagula taliyay inay jimicsi sameeyaan iyagoo lugeynaya maalin kasta.
Daraasaddan ayaa lagu ogaaday in, celceliska miisaanka lumay sanadkii ugu horreeyay uu ahaa qiyaastii 10.6 kg. In kasta oo kaqeybgalayaashu culeys heleen seddexdii sano ee ugu dambeysay tijaabada, dhamaadka, celceliska miisaanka lumay wuxuu ahaa qiyaastii 5.8 kg.
Daraasad kale oo hal sano ah ama liis gareyn la maamuley ayaa lagu ogaadey inay keento 5% ama in ka badan miisaan lumis.
Faa'iidooyinka kale ee liiska waxaa ka mid ah;
Orlistat Iska yaree khatarta nooca 2aad ee sonkorowga
Nooca 2aad ee sonkorowga ama sonkorowga mellitus waa xaalad halis ah oo saameyn ku leh sonkorta (glucose) dheef-shiid kiimikaadka jirka. Waxay dhacdaa marka jirkeenu uusan u nuglayn insulin. Insulin waa hormoonka mas'uulka ka ah nidaaminta socodka sonkorta (gulukooska) jirka. Waxay sidoo kale dhici kartaa haddii beeryarada aysan soo saarin insulin ku filan si ay u ilaaliso heerarka gulukoosta ee ku habboon jirka.
In kasta oo sababaha saxda ah ee xasaasiyadda insulin-ta aan si fiican loo aqoon, haddana cayilku waa mid ka mid ah waxyaabaha keena horumarka cudurka macaanka nooca 2-aad. Nooca 2-aad calaamadaha cudurka macaanka way fududaan kartaa in la iska indho tiro maadaama ay si tartiib tartiib ah u soo baxayaan, hase yeeshe, haddii aan la daweyn waxay u horseedi kartaa dhibaatooyin badan Nooca 2aad ee sonkorowga wuxuu sababi karaa dhibaatooyin badan sida dhiig karka, cudurada wadnaha iyo wadno qabadka. Calaamadaha iyo astaamahaan waxaa ka mid ah kaadi joogta ah, harraad siyaado ah, miisaan aan si ula kac ah u dhicin, daal, araga oo xumaada, infekshano isdaba joog ah, nabarro tartiib tartiib ah iyo mugdi meelaha qaarkood ee maqaarka ah sida qoorta iyo kilkilooyinka.
Orlistat waa daroogada miisaanka culus ee lumisa sidaa darteed waxay door muhiim ah ka ciyaareysaa joojinta bilawga nooca sonkorowga 2. Qaar ka mid ah falalka qaabka orlistat loo aqoonsaday inay door ka ciyaaraan nooca sonkorowga nooca 2 waxaa ka mid ah xoojinta xasaasiyadda insulin, yaraynta astaamaha dufanka aan caadiga ahayn ee aan caadiga ahayn, yareynta ama ka hortagga dheefshiidka dufanka cuntada, yareynta dufanka dareeraha ah, iyo soo saarista dheecaanka 'glucagon-like peptide-1' xiidmaha hoose ee hoose.
Daraasad lala sameeyay dadka cayilan, ama liiska oo ay weheliso qaab nololeed caafimaad leh (cunno dufan-yar iyo jimicsi) ayaa lagu ogaadey inay si weyn u yareyneyso dhacdooyinka nooca 2aad ee sonkorowga. Waxay sidoo kale keentay miisaan lumis weyn.
Daraasad kale ayaa lagu sameeyay dadka cayilan ama cayilan ee la ildaran nooca sonkorowga 2. Orlistat 120 mg ayaa la maamuli jiray saddex jeer maalin kasta 6 ama 12 bilood.
Waxaa la ogaaday in ka sokow liis gareynta miisaanka luminta, orlistat wuxuu awooday inuu hagaajiyo xakamaynta glycaemia. Xuduudaha glycaemia ee la hagaajiyay waxay ahaayeen hoos u dhac ku yimaada sokorta plasma gulukooska (FPG) iyo haemoglobin A1c (HbA1c). Xakamaynta glycaemia waxay ka madax banaanayd miisaanka oo yaraada.
Orlistat Hoos u dhigi karaa dhiig karka
Dhiig karka sidoo kale loo yaqaan 'hypertension' waa xaalad caafimaad oo dhacda marka cadaadiska dhiiggaagu u kordho heerar aad u sarreeya badanaana heerar aan caafimaad qabin. Cadaadiska dhiiggu wuu kordhaa marka xididdada dhiiggu yaraadaan.
Soo-gaadhista dheer ee dhiig karka waxay sababi kartaa xaalado daba dheeraada oo saameeya xubnaha muhiimka ah sida wadnaha, kalyaha wax kasta oo indhaha ah. Astaamaha ugu caansan ee dhiig karka waa madax xanuun, cabaadka xabadka, araga oo isbedela, dawakhaad, laab xanuun, neefta oo ku qabata iyo xitaa kaadida oo dhiig dareento.
Orlistat oo ah lipase inhibitor ayaa ka caawiya ka hortagga nuugista dufanka cuntada ee badanaa xannibaya halbowlayaasha. Orlistat sidaas darteed wax yar ayuu hoos u dhigi karaa cadaadiska dhiigga ee badanaa ku dhaca miisaan culus.
Daraasad ku lug leh 628 cayil ama dad aad u cayilan oo qaba cudurka dhiig karka, orlistat waxaa lagu siiyay 120 mg seddex jeer maalintii hal sano. Bukaanadani waxay lahaayeen cadaadis sare oo diastolic ah oo aan xakameynin oo ah cadaadis systolic go'doon ah. Marka lagu daro liiska daawada, bukaanada waxaan kula talinay inay ilaaliyaan cunno dufan yar inta lagu jiro mudada.
Daraasadu waxay soo warisay miisaanka oo yaraaday iyo sidoo kale hoos udhaca dhiig karka diastolic iyo go'doominta systolic labadaba. Waxay diiwaangeliyeen yareynta -9.4 mmHg ee dhiig-karka systolic iyo hoos u dhaca -7.7 mmHg ee cadaadiska diastolic.
Tani waxay muujineysaa in liiska loo adeegsan karo maaraynta dhiig karka shaqsiyaadka cayilan ama cayilan.
Hoos u dhiggan yar ee dhiig karka wuxuu kuxiranyahay isticmaalka muddada-dheer ee orlistat oo ay weheliso cunto kalooriyeedu hooseeyo iyo jimicsi.
Daraasad kale, adeegsiga erey-qorista ee liistada ayaa lagu ogaadey inuu yareyn karo cadaadiska dhiigga iyadoo loola jeedo yareynta 2.5 mmHg ee cadaadiska systolic iyo 1.9 mmHg ee cadaadiska dhiigga diastolic.
Orlistat Waxay yareysaa wadarta iyo kolestaroolka LDL
Kalastarol-ka yar ee cufnaanta lipoprotein (LDL cholesterol) waxaa badanaa loo yaqaan kolestaroolka xun maaddaama uu ku urursan yahay darbiyada marinnada dhiigga sidaas darteed wuxuu kordhiyaa halistaada dhibaatooyinka caafimaad sida wadnaha iyo istaroogga.
Wadarta kolestaroolka wuxuu ka kooban yahay lipoprotein-cufnaanta hoose (LDL) iyo kolestaroolka cufnaanta sare leh (HDL). Heerka sare ee wadarta kolestaroolka ayaa sareysa halista cudurada wadnaha.
Orlistat ayaa lagu soo warramey inuu yareynayo kolestaroolka LDL marka lagu daro faa'iidooyinka miisaanka oo yaraada.
Daraasad ku lug leh bukaanno cayilan ama cayilan, orlistat waxaa lagu siiyay qiyaasta 120 mg saddex jeer maalintii muddo toddobaadyo 24 ah. Bukaanku waxay lahaayeen BMI (tusmada jirka) oo ah 27-40 kg / m2 iyo hypercholesterolemia (kolestarool cufan-lipoprotein-hooseeya, LDL-C, 4.1-6.7 mol / l).
Orlistat waxaa lagu ogaadey inuu si weyn u yareeyo miisaanka iyo sidoo kale wadarta iyo kolestaroolka LDL. Waxaa sidoo kale la tilmaamay in saameynta yareynta kolestaroolka LDL ay ka madax banaan tahay faa'iidooyinka miisaanka oo yaraada. Daraasaddan ama liistada daraasaddan ayaa sifiican loogu dulqaatay marka laga reebo dhacdooyinka sare ee dhacdooyinka caloosha.
Daraasad kale, 448 qof oo leh heerar aad u sarreeya oo kolestarool ah ayaa la siiyay ama liis garayn ah 120 mg saddex jeer maalintiiba qiyaastii 6 bilood. Bukaannada ayaa sidoo kale la faray inay ku ekaadaan kaloriin yar iyo cunto dufan yar. Tani waxay keentay miisaan lumis weyn oo celcelis ahaan miisaanka oo lumay 7.4 kg. Sidoo kale, hoos u dhac weyn ayaa ku yimid wadarta kolestaroolka iyo kolestaroolka lipoprotein-ka ee cufnaanta yar ee 25-30 mg / dL.
Waxay intaa sii raaciyeen in saameynta hoos u dhigista kolestaroolka ay ka madax bannaan tahay liistada miisaan lumis saameyn.
Isdhexgalka daroogada waxaa loola jeedaa sida daroogooyinka kala duwan ay ula xiriiraan ama saameyn ugu yeeshaan kuwa kale. Isdhexgalka daroogadaani waxay saameyn ku yeeshaan habka daroogooyinka kale u shaqeeyaan waxaana laga yaabaa inay kordhiyaan dhacdooyinka waxyeelada xun ee la xiriirta isticmaalka daroogo gaar ah. Isdhexgalka Orlistat ee daroogooyinka kale ayaa la aqoonsaday.
Marka laga reebo isdhexgalka daawooyinka kale, orlistat laguma talin in loo isticmaalo haweenka uurka leh ama naas nuujinaya. Sidoo kale looma isticmaali karo carruurta da'doodu ka yar tahay 12 sano.
Waxaa si weyn lagugula talinayaa inaad xafiddo liistada daawooyinka ama daawooyinka iyo inaad marwalba u sheegto bixiyaha xanaanada caafimaadkaaga wixii talo ah ee ugu fiican ee ku saabsan isdhexgalka suurtogalka ah. Isdhexgalka daawooyinkaan liistada leh ayaa waxyeello weyn u geysan kara caafimaadkaaga kana takhalusaya faa'iidooyinka laga helay. Sidaa darteed, ha iska indha tirin isdhexgalkaan laakiin halkii hore ka taxaddar.
Qaar ka mid ah is-dhexgalka liiska caanka ah ee la yaqaan ayaa ah;
Is-dhexgalka Orlistat ee khafiifiyeyaasha dhiigga
Dhiiga khafiifiyeyaasha waa dawooyin loo isticmaalo daaweynta xanuunada wadnaha qaarkood iyo xaaladaha kugu keenaya halista xinjirowga dhiigga ee halista ah. Waxay badanaa ka caawiyaan dhiigga inuu si habsami leh ugu qulqulo marinnada dhiigga. Waxay kaloo ka hortagtaa xinjirowga inuu sameysto ama weynaado.
Dhiigan khafiifiyeyaasha waxaa kamid ah warfarin, heparin, apixaban, dabigatran iyo rivaroxaban iyo kuwa kale.
Orlistat waxay yareyn kartaa nuugista fitamiin K. Fitamiin K waa koox ka mid ah isku darka sida Vitamin K1 iyo vitamin K2. Faytamiin K wuxuu door muhiim ah ka ciyaaraa caawinta dhiiga xinjirowga iyo sidoo kale ka hortagga dhiigbaxa badan. Markay nuugisteedu xadidan tahay, waxaad u muuqan doontaa inaad dhiig baxdid si fudud oo fudud. Tani waa sababta qaadashada khafiifiyeyaasha dhiigga ee wadajirka ah ama liistada ay u kordhiso fursadahaaga dhiig-bax xad-dhaaf ah waxayna kaa dhigeysaa inaad si fudud u dhiig baxdid.
Daryeelka caafimaadka qaarkood ayaa kugula talin doona inaad hagaajiso qiyaastaada khafiifiyeyaasha dhiigga si aad ugu wada isticmaali kartid liistada. Si kastaba ha noqotee, ilaa lagugula taliyo marna ha beddelin qiyaasta daawooyinka.
Is-dhexgalka Orlistat ee daawooyinka HIV
Kuwani sidoo kale waxaa loo yaqaan dawooyinka antiretroviral. Daawooyinka ladagaalanka fayraska waxaa lasiiyaa dadka la xanuunsada bukaanka fayraska difaaca jirka ee HIV-ga (HIV) si loo yareeyo culeyska feyraska sidaa darteedna loo kordhiyo heerka badbaadada bukaanka.
Daawooyinka waxaa ka mid ah lopinavir, ritonavir, atazanavir, efavirenz, tenofovir iyo emticitabine.
Marka daawooyinkaan lala qaato liiska, waxaa la soo sheegay in cudurka antiretroviral virology uu hoos u dhacayo sidaas darteedna uu culeyska fayraska HIV uu kordhayo halkii. Sidaa darteed waa inaad iska ilaalisaa isticmaalka iskudarsanaanta daawooyinka liistada iyo antiretroviral.
Haddii ay jirto baahi loo qabo in la wada qaato, culeyska fayraska HIV waa in si dhow loola socdaa oo la joojiyaa isticmaalka liistada haddii la ogaado in culeyska fayrasku sii kordhayo.
Is-dhexgalka Orlistat ee dawooyinka suuxdinta
Dawooyinka Suuxdinta oo sidoo kale loo yaqaan dawooyinka ka hortagga qalalka ayaa loo isticmaalaa in lagu yareeyo calaamadaha suuxdinta / suuxdinta. Dufanku waa qayb muhiim u ah bukaannada suuxdinta. Tani waxay keeneysaa miisaanka oo kordha iyada oo saameyn xun ku leh daroogooyinkaas. Dawooyinka qabashada waxaa ka mid ah lamotrigine.
Orlistat dhinaca kale wuxuu yareeyaa nuugista dufanka. Markii la wada isticmaalo dawooyinka ka hortagga qalalka, orlistat ayaa la soo sheegay si loo yareeyo nuugista daawooyinka.
Qaar ka mid ah sheekooyinka sheeko xariifka ah ayaa sheegaya liiska ayaa la qaatay oo ay weheliso daawooyinka suuxdintu waxay kordhiyaan dhacdooyinka suuxdinta.
Is-dhexgalka Orlistat ee cyclosporine
Cyclosporine sidoo kale loo yaqaan 'ciclosporin' waa daawo qorista isdifaaca jirka. Waxaa loo isticmaalaa in looga hortago jirka inuu diido xubnaha kadib marka la tallaalo.
Marka la wada isticmaalo, liistada waxay si weyn u yareysaa heerarka plazma ee cyclosporine. Tani waa sababta oo ah liiska ayaa laga yaabaa inuu faragaliyo nuugista daawooyinkan.
Xirfadlayaasha caafimaadka qaarkood waxay kugula talinayaan inaadan isticmaalin liistada intaad isticmaaleyso cyclosporine. Si kastaba ha noqotee, dhakhaatiirta qaarkood waxay kugula talinayaan inay qaataan cyclosporine qiyaastii 3 saacadood ka dib qaadashada liiska.
Is-dhexgalka Orlistat ee amiodarone
Tani waxay loola jeedaa daroogada anti-arrhythmic ee loo isticmaalo in lagu soo celiyo garaaca wadnaha caadiga ah iyo sidoo kale ilaalinta joogteynta iyo laxanka joogtada ah.
Orlistat ayaa la muujiyey inay daciifinayso nuugista amiodarone ee dhiigga ku jirta. Xakamayntaani waxay horseedaa wadno garaac aan caadi ahayn oo khatar weyn u ah caafimaadka.
Isdhexgalka Orlistat leh levothyroxine
Levothyroxine waa dawo loo isticmaalo daaweynta dhaqdhaqaaqa qanjirada 'tayroodh' oo hooseeya sidoo kalena lagu daaweeyo noocyada goiters qaarkood. Dhaqdhaqaaqa tayroodh ee hooseeya waxaa loo yaqaan 'hypothyroidism' wuxuuna ku lug leeyahay astaamaha sida Daalka, maqaarka qalalan, xusuusta oo daciif ah, miisaanka oo kordha, xabeeb, murqaha oo daciifa, heerka kolestaroolka dhiigga oo sareeya, oo ka culus caadada caadiga ama aan caadiga ahayn, heerka garaaca wadnaha oo hooseeya, niyad jab iyo goiters .
Wada-shaqeynta levothyroxine iyo orlistat ayaa lagu soo warramey inay yareyneyso heerka levothyroxine-ka la nuugo. Orlistat waxaa lagu soo warramey inay ku xidhan tahay levothyroxine sidaa awgeed, xannibaya nuugista mindhicirada. Kuwani waxay ku dambayn karaan hypothyroidism daran oo u horseedi kara dhibaatooyin caafimaad sida dhalmo la'aan, cayilnaan, xanuun, iyo wadno xanuun.
Isdhexgalka Orlistat oo leh fiitamiino ku milma dufanka
Orlistat ayaa laga yaabaa inay joojiso nuugista qaar ka mid ah fiitamiinnada isku milma dufanka iyo sidoo kale nafaqooyinka qaarkood. Faytamiinnada ku milma dufanka waxaa ka mid ah fiitamiinnada A, D, E, K iyo beta-carotene.
Waxaa si fiican lagugula talinayaa inaad qaadato daawada isku-dhafan ee fiitamiinnada badan leh oo ay ku jiraan fiitamiinnada isku-milma dufanka. Kordhinta isku-dhafan ee fiitamiinada badan waa in la qaataa ugu yaraan 2 saacadood ka hor ama ka dib qaadashada liiska.
Orlistat Dhibaatooyinka kale
Saameynaha ugu caansan ee liiska ku dhaca waxay ku dhacaan dufanka aan dufanka lahayn ee ka gudbaya habka dheef-shiidkaaga. Badanaa saameyntooda caloosha tan iyo wadada asaasiga ah ee orlistat waa afka iyo dufanka aan isbeddelaynin ayaa lagu soo saaraa saxarada.
Dhibaatooyinka liiska ku jira waxay dhacaan inta lagu jiro toddobaadyada ugu horreeya ee qaadashada waana laga yaabaa inay baxaan. Si kastaba ha noqotee, calaamadaha qaarkood ayaa wali sii socon kara. Dhibaatooyinka soo raaca ayaa dhici kara badanaa haddii qiyaasta aysan sax ahayn.
Dhibaatooyinkaan soo raaca waxaa laga yaabaa in lagu qabto adoo qaata daawada kugu habboon adiga oo raacaya talooyinka dhakhtarkaaga ee ku saabsan sii wadista dhimista kaloriinta, cuntada dufanka yar iyo sidoo kale jimicsi.
Qiyaasta daawada lagu taliyey waa 120 mg oo la qaato seddex jeer maalintii. Orlistat waa in la doorbido in la qaato cuntada ka hor maxaa yeelay waxay badanaa ka hortagtaa ku dhowaad 30% dufanka cuntada in la nuugo. Qiyaaso badan ama liistada ayaan keenin saameyn xoog leh laakiin waxay u horseedi kartaa saameyn xun.
Dhibaatooyinkaan liiska ku jira waxaa ka mid ah;
Deg-deg ama dhibaato ah xakameynta dhaq-dhaqaaqa mindhicirka
Saxaro dabacsan oo soo noqnoqda
Calool xanuun ama malawadka ama xitaa calool xanuun
Ku sii gudbinta gaaska badanaa dheecaan dabada ah oo saliid leh.
Dhibaatooyinka kor ku xusan ee liiska kor ku xusan way ka sii dari karaan haddii aad qaadato dufan ka badan inta aad qaadan lahayd markii aad ku jirtay liiska daawooyinka.
Qaar ka mid ah liiska orlistat waxyeellooyinka xun in kasta oo dhif ah ayaa dhici kara. Waxaa lagugula talinayaa inaad si dhakhso leh u raadsato caawimaad caafimaad markaad aragto saameyntan. Dhibaatooyinkaan liis garaynta ah waxay ku dhici karaan qiyaas ka badan daroogada. Saameynta xun waxaa ka mid ah;
Farogelinta wareegga caadada
Ku adkaanshaha neefsashada
Calool xanuun daran oo aan ka bixi doonin
Barar (inta badan carrabka, cunaha ama wejiga).
Maaddaama kiisaska dhifka ah ee dhaawaca beerka daran ay ku xiran yihiin isticmaalka liiska, hubi inaad iska ilaaliso astaamaha dhaawaca beerka. Waa inaad isla markiiba istaagtaa oo aad raadisaa caawimaad caafimaad haddii aad isku aragto calaamadaha soo socda ee suurtogalka ah ee dhaawaca beerka;
Daal joogta ah
Cuncun ama cuncun daran oo joogto ah
Matag ama lallabbo
Cagaarshow (Indhaha ama maqaarka oo huruud noqda)
Saxaro midab khafiif ah / midab khafiif ah leh
Si fudud u dillaac
Bararka anqawyada ama lugaha.
Waxaan ku taxnay waxyeellooyin badan oo liiska ah iyo xitaa waxyeello la xiriirta, si kastaba ha noqotee, marwalba ha ahaato inaad ilaaliso wixii saameyn ah ee aad la kulmi karto oo aad la hadli karto bixiyahaaga daryeelka caafimaadka. U hubso inaad raacdo tilmaamaha si aad ah ugu habboon qiyaasta iyo isticmaalka saxda ah ee liiska si aad u dheellitirto inta badan saameyntan.
Sida daawooyin badan, dhibaatooyinka soo raaca ah ayaa dhici kara bilowga daaweynta waxayna ku libdhi karaan isticmaalka la sii wado si kastaba ha noqotee, waxyeelooyinka qaarkood ayaa sii socon kara. Xad-dhaafku waa qayb kale oo caan ah oo ku saabsan dhacdooyinka saameynaha badankood, sidaa darteed ma qaadan doontid wax badan oo ka mid ah liiska inta lagu taliyey.
Halkee u iibso Orlistat?
Alaabooyinka ay kujiraan liiska waxay ku dhacaan magacyo magacyadooda kala duwan. Tani waa sababta oo ah soosaarayaasha liistada ayaa kala duwan iyo sidoo kale fiirsashada.
Qiyaasta hoose ee liiska waxay ku dhacdaa magacyada calaamadaha liiska sida Alli iyo Orlos. Tan waxaa si fudud looga iibsan karaa khadka tooska ah ee shirkadaha wax soo saarayaasha badan iyo kuwa alaabada keena. Si kastaba ha noqotee, markaad tixgelinayso ama liiska ka iibso farmasiilayaasha la oggol yahay. CMOAPI waa mid ka mid ah soo saarayaasha liistada waxayna soo bandhigaan alaab tayo leh. The CMOAPI shirkaddu waxay ku jirtay ganacsiga muddo dheer sidaa darteedna waxay damaanad qaadeysaa tayada iyo liistada si fiican u baakadeysan.
Aad uga taxaddar dawooyinka la iska iibsado ee la iibsado. Si taxaddar leh u akhri calaamadaha si aad u fahamto isticmaalka saxda ah ee daroogada. Ka hubi soo saaraha liiska ama haddii kale ama liiska alaab-qeybiyeyaasha, taariikhda la soo saaray iyo sidoo kale taariikhda ay dhacayso. Hubso inaad sidoo kale hubiso waxyeellooyin kasta oo la muujiyey iyo digniin. Tusaale ahaan, dhaawaca liiska beerka ayaa ah mid ka mid ah digniinta ama tilmaamaha ay bixinayso Maamulka Cuntada iyo Maandooriyaha (FDA) ee loogu talagalay dadka isticmaala inay ka taxadaraan markay daawooyinka qaadanayaan.
"US orlistat label" (PDF). FDA. Ogosto 2015. Lahelay 18 Abriil 2018. Wixii cusbooneysiin calaamadeysan eeg bogga tusmada FDA ee NDA 020766
Barbier P, Schneider F (1987). "Syntheses of tetrahydrolipstatin iyo qaabeynta buuxda ee tetrahydrolipstatin iyo lipstatin". Helvetica Chimica Acta. 70 (1): 196–202. doi: 10.1002 / hlca.19870700124.
Bodkin J, Humphries E, McLeod M (2003). "Isku darka guud ee (-) - tetrahydrolipstatin". Joornaalka Australia ee Kiimikada. 56 (8): 795–803. doi: 10.1071 / CH03121.
Filippatos, Theodosios & Derdemezis, Christos & Gazi, Irene & Nakou, Eleni & Mikhailidis, Dimitri & Elisaf, Moses. (2008). Saamaynta xun ee Orlistat-Associated-Associated iyo Isdhexgalka Daroogada. Badbaadada daroogada: joornaal caalami ah oo ku saabsan sunta sunta iyo khibrada daroogada. 31. 53-65. 10.2165 / 00002018-200831010-00005.
Sharma, AM, & Golay, A. (2002). Saameynta miisaanka luminta ee liiska-ku-dhaca ee cadaadiska dhiigga iyo garaaca wadnaha ee bukaannada buuran ee qaba dhiig-karka. Joornaalka dhiig karka, 20(9), 1873–1878. doi.org/10.1097/00004872-200209000-00034.
Lagu qaabeeyey shaashad yar oo ah baakadaha, iyo baarka dusha ka saaran (taas oo ah, "allī"), laakiin si caadi ah ayaa loogu adeegsaday buuggan.
Zhi J, Melia AT, Eggers H, Joly R, Patel IH (1995). "Dib-u-eegista nuugista nidaamka xaddidan ee orlistat, lipase inhibitor, ee mutadawiciinta aadanaha ee caafimaadka qaba". J Clin Pharmacol. 35 (11): 1103-8. doi: 10.1002 / j.1552-4604.1995.tb04034.x. PMID 8626884.